Ajuju ndi adighi ajuju banyere Ello | Martech Zone
Ajuju A Na-adighi Aju Banyere Ello
Ekwenyesiri m ike na mmadụ na-ajụ ajụjụ ndị a, mana m ga-ejide ya na agbanyeghị n'ihi na achọtaghị m ha. Esonyeere m Ọ ezi mmalite - ekele enyi m na ndị ahịa ibe gị na-eri ahụ, Kevin Mullett.
Ozugbo, n'ime obere netwọkụ ahụ m na-agagharị wee chọpụta ụfọdụ ndị dị ịtụnanya nke m ahụtụbeghị mbụ. Anyị malitere ịkekọrịta ma kwuo okwu… ọ dịkwa ịtụnanya. Ọbụna onye kwuru na Ello nwere nke ahụ ọhụrụ netwọk isi. Na ngwụsị izu, etinyegoro m oge karịa na Facebook… ọkachasị elele onyonyo na ịchọpụta ndị mmadụ.
Gịnị Mere Anyị Ji Chọrọ Ello?
Mberede a na-agba gburugburu Ello na oke ibu na-agwa m otu ihe: Anyị enweghị obi ụtọ na netwọk anyị nwere. Fọdụ ndị na-elekwasị anya n'eziokwu na Ello enweghị nnabata, ndị ọzọ na-elekwasị anya na atụmatụ. Ha abuo n’enweghi isi okwu. Ọ bụghị banyere ikuchi ma ọ bụ atụmatụ ahụ, ọ bụ maka ma netwọkụ ahụ na-akwalite nkwalite mmekọrịta dị mma n'etiti mmadụ.
Ello ọ zara ya?
Mba, n’echiche m. Amaara m na Ello bụ beta ma ha emeela ka o doo anya banyere ọhụụ ha na-ede ihe ngosi:
Ndị mgbasa ozi nwere netwọkụ mmekọrịta gị. A na-enyocha ọkwa ọ bụla ị kesara, enyi ọ bụla ị mere na njikọ ọ bụla ị soro ga-esoro, dekọọ ma gbanwee n'ime data. Ndị mgbasa ozi na-azụta data gị ka ha nwee ike igosi gị mgbasa ozi karịa. Are bụ ngwaahịa a zụtara ma ree.
Ọ naghị ekwu nke a, mana m ga-akọwapụta ntakịrị ma kwuo na Ello kwenyere na ọgbụgba na dollar ụlọ ọrụ na-ere, na ụlọ ọrụ bụ ndị iro.
Ha ezighi ezi. Havemụ mmadụ nwere mmekọrịta ha na azụmaahịa, ngwaahịa na ọrụ kwa ụbọchị - ma ọtụtụ n'ime anyị na-enwe ekele maka mmekọrịta ndị ahụ. The ụlọ ọrụ ndị na-ewu ngwaahịa m zụrụ abụghị onye iro m, Achọrọ m ka ha bụrụ enyi m… na m chọrọ mie emie mmekọrịta mụ na ha.
Achọrọ m ka ha gee m ntị, zaghachi m, ma gwa m okwu n’onwe m mgbe ha matara na m ga-enwe mmasi.
Social Media Marketing na-agbaghara Anyị
Na mbido Facebook, enyere ụlọ ọrụ ohere ịtọlite ​​ibe iji wuo obodo ha ma mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịa ndị nwere ụdị ha masịrị. Ọ bụ nkwa nke ịre ahịa mgbasa ozi - na anyị ekwesịghị ịkwanye mgbasa ozi n'ihu onye ọ bụla ma manye ha site na nkwụsị nke nkwụsị iji gbalịa ịre ahịa ole na ole. Ndị ọchụnta ego na ndị na-azụ ahịa nwere ike na-ezirịta ozi ibe ha na ntanetị mara mma, nke dabere na ikike.
Anyị wuru anyị obodo na aku… na mgbe Facebook wetara ute si n'okpuru anyị. Ha bidoro izochi mmelite peeji anyị. Ha na-amanye anyị ka anyị kpọsaa ngwa ngwa nye ndị ahụ rịọrọ ka anyị tinye aka na ha!
Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi bụ de facto crap ọkọlọtọ nke ahịa - agbanweghi agbanwe kemgbe izizi ozi izizi, mgbasa ozi akwụkwọ akụkọ izizi, ma ọ bụ mgbasa ozi nyocha mbụ wepụrụ uche anyị na ọdịnaya anyị lebara anya. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ọdịda.
Ello Ọ Dị Iche?
Couplebọchị ole na ole iji Ello mee ihe, esoro m @onyeigbo. Achọrọ m ịmata onye ọ bụla na-eso m, ya mere, m pịrị na ya ozugbo. Ausdom bụ akara ngosi na mmelite ha na-agbanye ngwaahịa ha. Ugh… SPAM mbụ rutere Ello. Enwere m obi abụọ na Ausdom bụ ụdị izizi ebe ahụ, mana ha bụ ndị mbụ soro m ka ha wee kpọtụrụ aha.
Amụma m bụ na Ello ga-ejupụta na akaụntụ njirimara (dị ka Twitter nwere), na-enweghị ọdịiche ma ọ bụ njedebe. IHE a bụ nsogbu, ndị enyi m. Ọ bụ ezie na anyị chọrọ imepụta mmekọrịta na ụdị, anyị achọghị ka ha danye olu anyị. Ọ bụghị ịzụ na ire data na-enye m nsogbu na mgbasa ozi mmekọrịta (ọ bụ ezie na gọọmentị na-enweta ya na-atụ m ụjọ), ọ bụ ihe arụ nke ịre ahịa mgbasa ozi ọha na eze na-emekpa m ahụ. Ello ga - anwụcha ngwa ngwa ma bibie ya belụsọ ma ha emee ihe a gbasara ndị mmadụ ma buru ụdị ndị a.
Netwọk mmekọrịta anyị chọrọ!
Agam eji obi uto -enye tinye akara data m ọ bụla ma ọ bụrụhaala na m na-enye ya ha maka mgbanwe maka ezigbo onye ọrụ na ahụmịhe ahịa. Ha ekwesịghị ịzụta ya. Achọghị m ka ụlọ ọrụ nwee ike ịdebanye aha n’elu ikpo okwu wee malite ịgwa m okwu. Achọrọ m ka ha chere rue mgbe m ga-eme njem nke mbụ.
Ello abụghị azịza ya, ọ gaghị aza azịza ya site na ngosipụta ha. Mana obi abụọ adịghị ya na anyị nwere agụụ maka mgbanwe! Anyị chọrọ ihe ọzọ karịa Twitter, Facebook, LinkedIn na Google+. Anyị chọrọ netwọkụ ebe enwere nrụgide na-etinye onye na-azụ ahịa na-elekọta na enyere aka ahia wulite mmekorita nke nkwanye ugwu na ndu, olile anya, na ndi ahia.
Ndị ọchụnta ego ga-enweta ụdị netwọkụ a. Ndị ọchụnta ego na-akwụ ọtụtụ puku dollar maka ngwaọrụ iji nyochaa ma zaghachi mkparịta ụka mgbasa ozi mmekọrịta, n'ezie ha ga-akwụ ụgwọ ndenye aha na netwọkụ nke na-enye ntanetị maka ndị na-azụ ahịa mana ha na-enyere mmekọrịta ndị nwere ikike ikike ka e mepụta ma too. PS: Enwetara m ngwaahịa dị ka nke a na ihe ntanye ma ọ gafere. A sị na m nwere ego iji wuo ya!
Zitere m ọkpụkpọ oku ma ọ bụrụ na ịchọtala netwọkụ ahụ!
Tags: Uchechukwuelloihe ngosielekọta mmadụ mgbasa ozielekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozimgbasa mgbasa ozi mgbasa oziSocial Media Marketingelekọta mmadụ na netwọkspam
Sep 29, 2014 na 11: 11 AM
Sep 29, 2014 na 11: 27 AM
Ma ọ gbanwere, ọ dị nnọọ ka nke ahụ bụ "ụgwọ twitter".
Sep 29, 2014 na 2:25 PM
Ya mere weir. Amaghị m ebe m ga-etinye ihe maka nke a. Nke a bụ ihe akaebe na ị nọ na Ello: https://ello.co/douglaskarr/post/-mvhqyaB9IYOQ2PwFAu6hA
John J. Mgbidi
Ọkt 6, 2014 na 9:29 AM
Amaara m na m bụ agadi nwoke n'ihi na echere m na nzuzo na ndị mmadụ ga-abịa ruo n'ókè nke na ha ghọtara na ha nwere ike inwe afọ ojuju ka mma ma ọ bụrụ na ha dị njikere ịkwụ ụgwọ.
Ọkt 6, 2014 na 10:02 AM
M nọnyeere gị!